FOIRE INTERNATIONALE DES PIERRES BRUTES : Nampiavaka ny foara ny trano heva 16 an’ireo mpandraharaha Malagasy | déliremadagascar
FOIRE INTERNATIONALE DES PIERRES BRUTES : Nampiavaka ny foara ny trano heva 16 an’ireo mpandraharaha Malagasy
Vato sarobidy, firavaka, vatosoa tsy mbola voapaika isan-karazany milanja 800 kilao avy any amin’ny firenena samihafa nampirantiana nandritra ny foara iraisam-pirenena ho an’ny vato tsy mbola voapaika (foire internationale des pierres brutes), tany « Jaipur Inde ». Mpandraharaha madinika miasa amin’ny sehatry ny harena an-kibon’ny tany avy any « Afghanistan, Ethiopie, Canada, Thaïlande, Tanzanie, Zambie » nandray anjara tamin’ny foara ny 08 ka hatramin’ny 10 janoary 2018. Nampiavaka ity andiany nokarakarain’ny « Gravel, Concrete & Emulsion Production Corporation » (GCEPC) ity ny fandraisan’anjara nataon’ny mpandraharaha madinika amin’ny sehatry ny vato avy eto Madagasikara. 27 ny trano heva azo notsidihana ka mpandraharaha Malagasy avokoa no nitana ny trano heva miisa 16 tamin’ireo.
Fahazoana ny lalam-barotra
Tanjon’ny mpikarakara ny hetsika ny fampihaonana mivantana an’ireo mpandraharaha madinika amin’ny sehatry ny harena an-kibon’ny tany amin’ireo indostria lehibe mpanodina vato maneran-tany. Anisany antony nisafidianana ny toerana nanaovana ny foara noho i Jaipur tanan-dehibe ahitana indostria miantsehatra amin’ny resaka vato. Nambaran’ny mpikarakara avy eto Madagasikara sady Filohan’ny komity nasionalin’ny harena an-kibon’ny tany (CNM), Dr ANDRIATSIRA fa vao vita ny fanokafana ny foara tamin’ny fomba ofisialy ny marainan’ny alatsinainy 08 janoary 2018, mpandraharaha Malagasy maro no efa nahazo « commande » sahady.
One comment on “FOIRE INTERNATIONALE DES PIERRES BRUTES : Nampiavaka ny foara ny trano heva 16 an’ireo mpandraharaha Malagasy”
RAMANOVONTSOA BONI ARMEL
mpandraharaha madinika momban’ny harena an-kibon’ny tany ny tenako
mba te hafantatra ny mombamomba an’andriamatoa Dr ANDRIATSIRA.